Amniga Wadada Isku Xirta Degmada Afgooye Iyo Mareerey Oo Soo Hagaagaya – Goobjoog News
Amniga Wadada Isku Xirta Degmada Afgooye Iyo Mareerey Oo Soo Hagaagaya
Isbedel dhanka ammaanka ah ayaa laga dareemayaa wadada isku xirta degmada Afgooye iyo deegaanka Mareerey oo gobalka Shabellaha Hoose ka wada tirsan, xilli halkaasi Isbaaro loogu dhigan jiray gaadiidka safarka ah.
Sayid Baalle Mayow oo ah gudoomiyaha Mareerey oo lasoo xiriiray Goobjoog News, ayaa sheegay in hadda gaadiidka ay si caadi ah u shaqo billaabeen, islamarkaana wadadaasi ay hadda tahay mid aanay yaallin wax isbaaro ah.
Sababta arrintaan ayuu ku sheegay Gudoomiyaha ka dib markii ciidamada ammaanka ay sameeyeen howlgallo, islamarkaana kooxihii wax Isbaareysan jiray ay iyaguna carareen.
“Amniga wadada isku xirta Mareerey iyo Afgooye hadda aad buu u wanaagsanyahay, ciidamada waxay ku guuleysteen inay la dagaallamaan cid walba oo shacabka dhibaato ku haysay, waxaana sidoo kale socda howlgallo kale oo amniga lagu sugayo” ayuu yiri gudoomiyaha.
Gaadiidka ka dhex shaqeeya deegaanada gobalka Shabellaha Hoose ayaa aad uga cabanaya Isbaarooyin xad dhaaf ah oo la dhigay meello ka mid ah gobalkaasi.
Guddiga Doorashada Dadban Iyo Galmudug Oo Ka Shiray Arrimaha Doorashooyinka
Wasaaradda Shaqada Iyo Shaqaalaha Oo Dadka Loo Shaqeeyo Ka Dalbay In Ay Ilaaliyaan Xuquuda Shaqaalaha
Goehpu hvcruz Buy cialis online without prescription canadian pharmacy cialis 20mg
Ikauvu olgpjw Buy cheap viagra cost of cialis
Ibitbi ntijmh Cialis express delivery canadian online pharmacy
viagra en farmacias del dr simi cialis generic reviews disco...
non prescription viagra buy cheap viagra how to buy viagra...